Su'aalaha - Waxaan ku taxnaa su'aalaha iyo jawaabaha ugu badan - Gawaarida.com
Ma waxaad raadineysaa gaari cusub?
Iibsashada gaari mar uun waa xaqiiqo ay tahay inaan dhammaanteen wajahno. Halkan waxaa ku yaal liiska dhowr tallaabo oo iibsi baabuur oo muhiim ah inaad raacdo. U hoggaansamida talada ayaa kaa caawin doonta inaad lacag keydiso, inaad hesho heshiiska ugu fiican, waxaana rajeynayaa, inay yareyneyso xaddiga walbahaarka ku lug leh iibsashada gaari.
1. Samee baaritaankaaga
Waxa ugu muhiimsan ee la ogaado ka hor intaadan iibsan gaari waa in aqoontu tahay awood. Waa qalad inaad iibsato baabuur badan adigoon marka hore baarin gaariga aad rabto. Waxaad ka ogaan kartaa uun wax kasta oo aad rabto inaad ka ogaato baabuur internetka.
Sidoo kale, haddii aad ka fikireyso inaad iibsato gaari cusub, ujeeddadaadu waa inaad heshid qiimaha “qaansheegadka” ee gaariga, oo aan ahayn qiimaha la xayeysiiyay Qiimaha “qaansheegadka” waa midka uu ganacsaduhu ku siiyay soo-saaraha gaariga.
Dhinaca kale, haddii aad ka fekereyso inaad iibsato gaari la isticmaalay, baar qiimaha ugu yar ee dib loo iibiyay ee nooca gaariga gaarka ah. Xogtaan waxay ku siin doontaa awood gorgortan oo weyn. Haddii aad qorsheyneyso inaad ka ganacsato gaarigaaga hadda, qiimeynta suuqa baarista gaarigaaga, sidoo kale. Ogaanshaha qiimaha ganacsigaagu wuxuu kaloo noqon karaa aalad gorgortan xoog leh.
2. Eeg qiimaha suuqa
Waxaan ku haystaa sharci la dejiyay markasta oo aan wax ka iibsanayo gaari: Marwalba waan hubiyaa inaan ka baxo ugu yaraan hal iibiye. Sidan, marwalba waan ogahay qiimaha hoose ee hoose, inta badan la isiiya intaanan bixin.
3. Isticmaal internetka
Had iyo jeer internetka ka baari gawaarida la soo bandhigo oo u yeer dhowr ganacsade. Gawaarida.com waxay bixisaa liis ballaaran oo gawaari iyo ganacsato ah, wixii su’aalo ah – noo soo dir email.
Ma rabtaa inaad iibiso gaari?
Waa maxay qiimaha gaarigaaga?
Tani waa su’aal weyn marka qof uu raadinayo inuu iibiyo ama beddelo baabuur. Hadda waxaad isku dayi kartaa inaad gaarigaaga ku xayeysiiso Gawaarida.com si aad u aragto jawaabta aad ka heli karto dadweynaha.
Haddii aadan haysan waqti ama tamar aad ku tusi karto gaarigaaga kuwa iibsadayaasha kala duwan, liiska xiriirka ganacsatada ku leh goobta oo ku siin kara qiimo lagana yaabo in qiimo dhimis lagu sameeyo gaarigaaga cusub.
Waa maxay qiimo cadaalad ah oo lagu iibiyo gaarigaaga?
Hubi Gawaarida.com Gawaarida la midka ah iyo xaaladaha la midka ah ee iibiyaasha qiimaha iyo adeegsadayaashu ay iibinayaan.
Waa xaqiiqo cad in hadaad sifiican u daryeesho gaarigaaga aad ku raaxeysaneyso wadista gaariga isla markaana aad ka heli karto qiimo fiican marka la gaaro waqtigii la iibin lahaa.
Xagee ka heli karaa gawaari hore loo isticmaalay?
Kahor intaadan iibsan gaari cusub, waxaa habboon inaad eegto gawaarida la isticmaalay.
Haddii aad lacag keydin karto oo aad heli karto gaari ku raaxeysan kara sida ugu cusub, iyagu maahan!
Gawaarida.com ka hel qaybta gawaarida la isticmaalay, u fiirso gawaarida ugu dambeysa ee iibka ah
Ma haysaa dayactir & adeeg dayactir?
Ma bixinno adeeg noocaas ah hadda. Waxaan baareynaa sida ugu wanaagsan ee aan kuu caawin karno.
qof ayaa aragtay Su’aalaha
Toyota Premio 2006 Targo AI40
4 toddobaadyo ka hor
Toyota Land Cruiser Prado 2008 Targo AH08
4 maalmo ka hor
Toyota Allion 2006 AH74
1 usbuuca ka hor
Toyota Premio 2006 Targo AH19
3 toddobaadyo ka hor
Toyota premio 2006 Targo AI33
Libaax Blue 2022 – 200CC Nadiif ah iyo Damiin leh
Libaax L-200 Blue Celis oo Targo la socota
Qiimaha Gawaariga ($)
Lacag bixinta hore ($)
Bixinta bil kasta
Wadarta Bixinta Dulsaarka
Wadarta Lacagta Bixinta